United Kingdom - ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်း
အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါသည်။ အသက်အတည်ပြုခြင်းမိတ်ဆက် ယူကေ၏ နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်တွင် မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကလေးများ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့် တိုးလာခြင်းကြောင့် ဖိအားများ ရှိလာပါသည်။ ကျောင်းများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုနှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများလည်း ရှိသည်။ ယင်းတို့ထဲမှ အများအပြားသည် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို အတားအဆီးမရှိ ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ယူကေအစိုးရသည် ဥပဒေပြုရေးအကြိုစိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ၎င်း၏ အွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေကြမ်းမူကြမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းသည် ကလေးများအား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေ အပိုင်း (၃) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အွန်လိုင်းဂေဟစနစ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးသည်။ နယ်ပယ်အတွင်းရှိ ဝဘ်ဆိုက်များသည် ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲသူများအတွက် 'စောင့်ရှောက်မှုတာဝန်' ရှိသည်။ တရားမဝင်သော အကြောင်းအရာများ ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန်နှင့် သုံးစွဲသူများအား 'တရားဝင်သော်လည်းကောင်း အန္တရာယ်ရှိသော' အကြောင်းအရာများမှ ကာကွယ်ရန် စီမံချက်များ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို ဖြေရှင်းရာတွင် ဘီလ်သည် မည်မျှထိရောက်မှုရှိမည်နှင့်ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုအချို့ရှိနေသည်။ သက်ဆိုင်သူအများအပြားက စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံကို ဖုံးကွယ်ထားပါသလား။ အစကတော့ မဟုတ်ဘူး။
မူလရေးဆွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ဥပဒေကြမ်းအသစ်၏ နယ်ပယ်သည် 'ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများ' နှင့် 'အသုံးပြုသူမှ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုများ' တို့ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းဝန်ဆောင်မှုများစွာတွင် အသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသူဒြပ်စင်ပါရှိသော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့် လူများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကို အပ်လုဒ်တင်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏နယ်ပယ်ပြင်ပတွင် ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ၏ သိသိသာသာအချိုးအစားကို ချန်ထားခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Bill ရဲ့ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို ပျက်ပြားစေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အခြားဝဘ်ဆိုက်များမှ စည်းမျဥ်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည့် United Kingdom တွင်လည်း ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထားသည်။
ထို့အပြင်၊ အဆင့်ကစားကွင်းတစ်ခုသေချာစေရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသောအာဏာများသည် လုံလောက်သောလျင်မြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ လိုက်နာမှုကို အာမခံရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ British Film Classification ဘုတ်အဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် Ofcom ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ၎င်း၏အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ Ofcom သည် အစိုးရသစ်ကို ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်မှာ အွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေကြမ်းသည် ကလေးများနှင့်ထိုက်တန်သော အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအကာအကွယ်များကို ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
8 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2022 ရက်နေ့၊ လုံခြုံသောအင်တာနက်နေ့တွင်၊ အစိုးရသည် အထောက်အကူဖြစ်စေသောနည်းလမ်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ဝန်ကြီး Chris Philp မှ တရားဝင်ပြောကြားလိုက်သောအခါတွင်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်:
ကလေးများသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို အွန်လိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို မမြင်သင့်သောအရာများကို အွန်လိုင်းတွင် မမြင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားသောကြောင့် စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းမှုကို ခံထိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ အင်တာနက်ဘေးကင်းရေးဥပဒေကြမ်းအား အားကောင်းလာစေရန်အတွက် အင်တာနက်ကို ကလေးများအတွက် ပိုမိုဘေးကင်းသောနေရာဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် ညစ်ညမ်းဆိုက်များအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းအား အောက်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး 17 ခုနှစ် မတ်လ 2022 ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ပထမဆုံးဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဤအဆင့်သည် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အချေအတင်မျှ ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းပါ စာသားအပြည့်အစုံကို အဆိုပါစာမျက်နှာမှ ရယူနိုင်ပါသည်။ ပါလီမန်လွှတ်တော်.
လွှတ်တော်အမတ်များသည် ဥပဒေကြမ်းကို ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်ခြင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ဖတ်ရှုမည့်ရက်ကို မကြေညာသေးပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွက် အသက်အတည်ပြုခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ လူစုလူဝေးဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံးသို့ ညွှန်ကြားထားသည်။ စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဆိုဒ်များကို အသုံးပြုထားသည့် ကလေးများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။
ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်သည့်ဥပဒေသည် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တားမြစ်ထားပုံရသည်။ သို့သော်လည်း သတင်းကော်မရှင်နာသည် စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဆိုဒ်များကို အရေးယူခြင်းမပြုပါ။ ယင်းပြဿနာကို အနာဂတ်တွင် အသစ်က ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဘီလ်. လက်ရှိတွင် တရားစွဲဆိုခံရသူများနှင့် ပြန်ကြားရေး ကော်မရှင်ရုံးတို့အကြား တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယခင်နယူးဇီလန်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကော်မရှင်နာဖြစ်ခဲ့သော ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာ John Edwards ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် တိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားနိုင်သည်။